कालो बक्स चेतावनी १०१: यो के हो र तपाईंको औषधिहरूको लागि मतलब हो - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य भारी खेल खेलहरु चेकआउट समुदाय, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> कालो बक्स चेतावनी के हो?
यो कुनै अचम्मको कुरा होइन कि सबै औषधिहरू बराबर हुँदैनन्। जबकि केही औषधिहरूको न्यूनतम साइड इफेक्टहरू हुन्छन्, अरूसँग अधिक गम्भीर हुन्छन्, साथै प्रतिकूल घटनाहरूका लागि जोखिमको साथ। यदि त्यहाँ एक औषधि को उपयोग को बारे मा सुरक्षा चिन्ताहरु छन्, यु एस खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) चेतावनी लागू गर्दछ। पर्चेको औषधि लेबलिंगमा पाइने चेतावनी को प्रकार साइड इफेक्ट को प्रकार मा निर्भर गर्दछ। एक एफडीए कालो बक्स चेतावनी अधिक गम्भीर साइड इफेक्ट संग ड्रग्स को लागी ध्यान आकर्षित गर्दछ, जस्तै हृदय विफलता। चेतावनीले सल्लाहकारहरू र बिरामीहरूलाई सतर्क गराउँदछ जुन औषधिले गम्भीर वा जीवन-जोखिमपूर्ण जोखिम लिन सक्छ।
कालो बक्स चेतावनी, वा बक्से चेतावनी, एक एफडीए चेतावनी हो कि उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराउन गम्भीर वा जीवन-जोखिमपूर्ण साइड इफेक्टको बारेमा ड्रगले गर्न सक्ने चेतावनी। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्सको लागि प्याकेज सम्मिलितमा फेला पर्‍यो, यो एफडीएले दिएको सबैभन्दा गम्भीर चेतावनी हो।
एक औषधि एक कालो बक्स चेतावनी जब यो संभावित गम्भीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया छ कि अस्पताल भर्ना र मृत्यु हुन सक्छ। कालो बक्स चेतावनीले कसरी व्यक्तिहरूको समूहहरूमा प्रतिक्रिया कसरी खराब हुन सक्छ भनेर वर्णन गर्दछ, जस्तै गर्भवती महिलाहरू वा बच्चाहरू वा वृद्धहरूका लागि।
संयुक्त राज्य मा सबै ड्रग्स एफडीए अनुमोदन को लागी परीक्षणको माध्यम बाट जानु पर्छ। यो परीक्षणको बखत, एक औषधिको साइड इफेक्ट हुन सक्छ जुन बजारमा जानु अघि ब्ल्याक बक्स चेतावनीको लागि कल गर्दछ। अवसरमा, नयाँ औषधिहरूको लागि यी क्लिनिकल परीक्षणहरूको समयमा, हरेक साइड इफेक्ट पत्ता लगाउन सकिँदैन किनभने केही हजार बिरामीहरूमा मात्र परीक्षण हुन्छ। त्यहाँ अझ गम्भीर साइड इफेक्टहरू फेला पार्न सकिन्छ, जुन औषधि पहिले नै स्वीकृत भइसकेपछि, जब यो दसौं वा सयौं बिरामीहरूमा प्रयोग हुन्छ। जब यो हुन्छ, कालो बक्स चेतावनी औषधीमा थप्न सकिन्छ यसले बजारमा असर गरेपछि।
म कालो बक्स चेतावनी कहाँ पाउन सक्छु?
जबकि कालो बाकस चेतावनी बोतल वा प्याकेज सम्मिलित औषधि को लागी देखा पर्नेछ, चेतावनी बिरामी जानकारी पानामा पनि देखा पर्नेछ जुन तपाईंको फार्मेसीले प्रिस्क्रिप्शन भर्दा प्रदान गर्दछ।
कुन ड्रगमा कालो बक्सको चेतावनी छ?
600०० भन्दा बढी औषधीहरूले कालो बक्स चेतावनी दिन्छ र of०% व्यक्तिहरूले कम्तिमा एउटा ब्ल्याक बक्स चेतावनीको साथ एक औषधि लिइरहेका छन्, रिक रेयल, आर। पीएच, फार्मसीका निर्देशक भन्छन्। डेंटनको विश्वविद्यालय व्यवहार स्वास्थ्य टेक्सास मा यहाँ कालो बक्स चेतावनीको साथ औषधी गाईडमा सूचीबद्ध सबै भन्दा सामान्य रूपमा निर्धारित औषधिहरू छन्।
औषधि वर्ग औषधि नाम चेतावनीको कारण
एन्टीडिप्रेसन्ट्स / सेलेक्टिभ सेरोटोनिन रिउपटेक इनहिबिटरहरू (एसएसआरआई) जोलोफ्ट ( sertraline हाइड्रोक्लोराइड )
प्रोजाक ( फ्लुओक्सेटिन हाइड्रोक्लोराइड ) सबै एन्टीडिप्रेसन्ट्सले २००aमा एक ब्ल्याक बक्स चेतावनी प्राप्त गर्‍यो र उपभोक्ताहरूलाई मानसिक औषधि सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि आत्महत्याका विचारहरू र यी औषधिहरूसँग सम्बन्धित आचरणको ब्यवहारको बारेमा चेतावनी दिन।
ब्रोन्कोडाइलेटरहरू / LABAs र स्टेरॉइडल विरोधी भड़काऊ एजेंटहरू एडवायर डिस्कस ( फ्लुटिकासोन साल्मेटेरॉल ) दमको कारण हुने मृत्युको जोखिम बढ्यो
विविध एन्टिसाइकोटिक एजेन्टहरू सेरोक्वेल ( quetiapine fumarate ) वृद्धहरूमा मृत्यु दर बढेको छ
डिमेंशिया-सम्बन्धित मनोविज्ञान र युवा वयस्कहरू मार्फत बच्चाहरूमा आत्महत्याको वृद्धि
निश्चित एनाल्जेसिक्स / मादक पदार्थ OxyContin ( ऑक्सीकोडोन ) ड्रग / लतमा निर्भरता
एन्टिबायोटिक (फ्लुरोक्विनोलन्स) लेभाक्विन ( लेभोफ्लोक्सासिन ) सबै उमेरहरूमा टेंडिनिटिस र टेन्डन फुट्ने जोखिम
एनिटाइटाबोलिटहरू वा फोलिक एसिड विरोधीहरू मेथोट्रेक्सेट अन्त-चरण कलेजो रोगको बढेको जोखिम
एन्टी-चिन्ता औषधि Xanax होइन हालमा एक कालो बक्स चेतावनी छ। जे होस्, यो केहि विवादास्पद हो र त्यहाँ बेंजोडाइजेपाइनहरूलाई कालो बाकस चेतावनी दिन जोड दिइन्छ गम्भीर प्रतिकूल फिर्ताको घटनाहरूलाई औषधी रोक्नबाट रोक्न।
चिसो र खोकी लागेमा के खाने
के गर्ने यदि तपाईंको औषधिमा कालो बक्स चेतावनी छ
कुनै नयाँ प्रिस्क्रिप्सन सुरु गर्दा तपाईको डाक्टर वा फार्मासिष्टको साथ औषधि सुरक्षा जानकारी लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ। एक एफडीए कालो बक्स चेतावनी छ कि एक पर्ची लिने निर्णय हल्का लिनुहुन्न र तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग छलफल गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यसेवा पेशेवरहरूसँग कुराकानी निर्धारण गर्ने उत्तम तरिका हो कि यदि औषधिको फाइदाले यी परिदृश्यहरूमा सम्भावित जोखिमलाई बढी गुमाउँछ भने।
सबै औषधिहरू जस्तै, त्यहाँ एक फाइदा र विचार गर्न लागत छ, रेल भन्छन्। तपाईंको फार्मासिष्टलाई प्रश्नहरूको साथ परामर्श गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ यदि यो तपाईंको लागि सही औषधि हो भने।
सीओपीडी बनाम दम: कुन खराब हो?
Tresiba vs. Toujeo: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
के म एडविल लिन सक्छु र अल्कोहल पिउन सक्छु?
तपाइँ कब्जियत लाई मद्दत गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ
अब उच्च रक्तचाप कसरी कम गर्ने
claritind२४ घन्टा को लागी प्रयोग गरीन्छ
यू को प्रतिशत को बारे मा s प्रजनन उमेर को जनसंख्या बांझपन अनुभव?